A chikuru inoshanda chinetso binary pfungwa kutsvakurudza tsika ndechokuti polarizes kukurukurirana. Calling Emotional Contagion kana Ravirai, Ties, uye Time unethical mukanyiwa zvidzidzo izvi pamwe utsinye zvechokwadi nenzira hazvisi kubatsira. Nokubva binary mafungiro uye mutauro polarizing haisi kudanwa kuti tishandise mutauro muddled kuvanza unethical maitiro. Asi, kuramba pfungwa wezvetsika zvichaita, ndinofunga, kutungamirira zvikuru kungwarira uye chaiyo mutauro. Uyezve, kuramba pfungwa kutsvakurudza tsika anojekesa kuti munhu wose-kunyange vatsvakurudzi vari kuita basa iri kare vaiona "yetsika" -Unofanira kuedza pave kunyange nani chemufungo zvakanakanaka basa ravo.
A chokupedzisira vabatsirwe ane danho kuramba mafungiro ndechokuti rinokurudzira kuzvininipisa zvedzidzo, izvo akakodzera mukutarisana yakaoma nematambudziko zvetsika. Mibvunzo yokutsvakurudza tsika munyika digitaalinen zera vanonetsa, uye hapana chete munhu anofanira kuva nechivimbo kwake anokwanisa rokuongorora kwakarurama nezvaaiita.